टाउकाे दुखेकाे ठिक पार्न अपनाउनुहाेस् यी उपायहरू - ज्ञानविज्ञान
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रायः मानिसले आफ्नो जीवनमा एक या एकभन्दा बढीपटक टाउको दुखाइको समस्या भोगेका हुन्छन् । टाउको दुख्नुका कारण सामान्यदेखि प्राणघातकसम्म हुन सक्छन् । चिकित्सकहरूले जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई टाउको दुख्दा सामान्य रूपमा एकपटक आँखा जचाउन सल्लाह दिने गरिन्छ ।
प्रायः टाउको दुख्नुको कारण आँखासम्बन्धी समस्याले नै हुन सक्छ । आँखाको जाँचपछि वा आँखाको समस्याको उपचारपछि पनि टाउको दुख्न नछाडे समस्या अर्कै हुन सक्छ । यो अवस्थामा टाउको दुख्ने कारण यस्ता हुन सक्छन् :
अन्य सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक किसिमले दुखेमा ।
अचानक र असाध्यै दुखेमा ।
दुखाइसँगै ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी उचाल्न वा घुमाउन असजिलो भए ।
टाउको दुखाइसँग आँखा हेर्न अप्ठ्यारो हुने, एउटा चिज दुईवटाजस्तो देखिने, हातगोडा लाटो हुने, चक्कर लाग्ने, वान्ता हुनेजस्ता लक्षण देखिए ।
टाउको दुख्नुको संवेदनशीलताबारे सजग भएर सकेसम्म तुरुन्त दक्ष चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
दैनिक ६–८ गिलास पानी अनिवार्य पिउने ।
दैनिक सागपात तथा फलफूल खाने ।
सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन नगर्ने ।
दीर्घकालीन रोगहरू, जस्तैः मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत समस्या छ भने नियमित जाँच गराउने ।
शारीरिक व्यायाम गर्ने ।
आँखा जाँच गराइराख्ने ।
यसरी कैयौँ दिनसम्म लगातार टाउको दुख्ने समस्यालाई ‘माइग्रेन’ भनिन्छ। माइग्रेनबाट ग्रसित हुनेहरूलाई विशेष गरी आधा टाउको दुख्ने गर्दछ। कहिले दाहिने टाउको दुख्छ भने, कहिले देब्रे! कहिले अगाडिको टाउको दुख्छ भने कहिले पछाडिको!
त्यसो भए यसको समाधान के त?
न्यूरोलोजिस्टहरूका अनुसार माइग्रेन जस्तो लगातार टाउको दुख्ने समस्यालाई नियमित रूपमा यौन सम्पर्क गर्दा धेरै राहत मिल्दछ। अनुसन्धानमा संलग्न भएका आधाभन्दा बढी माइग्रेन ग्रसितहरूले यौन सम्पर्कपछि त्यसको लक्षणमा केहि कम आएको महशुस गरेका थिए। यौन सम्पर्क गर्नाले हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक पेनकिलर ‘इण्डोरफिन’ पैदा हुने गर्दछ र मांशपेसी दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्यालाई कम गर्दछ।
यदि तपाईँलाई टाउको दुख्ने समस्याले सताइरहन्छ भने, ह्याम राखिएका बाह्य खानेकुराहरूको सेवन नगर्नुहोस्। यसमा ‘टाइरामाइन’ र ‘नाइट्रेट’ जस्ता तत्वहरू हुन्छन्, जसले मस्तिष्कमा रगतको चाप बढाउने काम गर्दछ। मस्तिष्कमा रगतको चाप बढेपछि टाउको दुख्नु स्वाभाविक नै हुन जान्छ।
गेडागुडीमा ‘म्याग्नेसियम’ जस्ता फाइदाजनक खनिजपदार्थ धेरै मात्रामा पाइन्छ, यसले शरीरका माशंपेसीहरूलाई आराम प्रदान गर्दछ। हाम्रो शरीरमा म्याग्नेसियमको मात्रा कमी भयो भने मस्तिष्कमा रगतको चाप कम हुने तथा रगतमा सुगरको मात्रा कम हुने हुन्छ, जसले गर्दा टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूको धारणा रहेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले खोज गरेअनुसार धेरैजसो माइग्रेन ग्रसितहरूमा म्याग्नेसियमको मात्रा कमी भएको देखिएको छ।
Don't Miss it शरीरमा पानीको कमी हुँदा देखिने असरहरु यस्ता छन्
Up Next के तपाइकाे आँखा कमजाेर छ ? छ भने यस्ता खानेकुरा खानुस्